पूजालाई जवर्जस्ती मानसिक रोगी बनाउँदै थापा, मन्त्रीका निजी सचिवको यो कस्तो चलखेल ? - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ जेठ ३१ गते ६:०९
स्रोतका अनुसार समितिले पीडित पुजालाई रक्षा नेपालले खर्च व्यहोर्ने गरी साथी नामक संस्थामा पठाउने तयारी गरेको छ । यस सम्बन्धमा पूजाले भनिन्,‘म रक्षा नेपालमा फर्केर जान्न, न त म साथी भन्ने संस्थामा नै जान चाहान्छु, दोषीमाथि छानबिन हुनुपर्छ, सञ्चारमाध्यममा रक्षा नेपालमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण नगरी कसैलाई चोख्याउने प्रयास गरिन्छ भने म अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु ।’ समितिमा केन्द्रिय बालकल्याण समिति तर्फबाट सुनिता साह, महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तर्फबाट अधिकृत अनिता अधिकारी र चाइल्ड हेल्प लाइनको तर्फबाट देवी खतिवडा सदस्य रहेका छन् ।
पूजा बोहराले अन्य बालबालिकामाथि समेत शोषण भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत आरोप लगाएकी थिइन् । छानविन समितिले प्रत्येक बालबालिकालाई छुट्टाछुट्टै नियन्त्रणमा लिई वा सुरक्षित तरिकाले सो आरोपमाथि छानविन वा सोधपुछ गरेको भए उनले अपराध गरे–नगरेको छर्लङ्ग हुन्थ्यो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । पुजाले त्यहाँ बसेका भाई–बहिनी कता छन् ? संस्थामा बस्ने, खाने र पढ्ने आफन्तको नामै सार्वजनिक गरेकी थिइन । उनीहरुबारे छानविन र खोजतलासै नगरी थापालाई चोख्याउने प्रपञ्च रचिएको आरोप छ ।
त्यसो त, पूजालाई अपहरण शैलीमा प्रदिप घिमिरे नामका ब्यक्तिले लगेको भन्दै खोजी गर्न प्रहरीमा उजुरी दिने थापाविरुद्ध पुजा स्वयम् उपस्थित भएर शान्ति सुरक्षा पाउँ भन्दै उजुरी गरेकी थिइन । प्रहरीले थापालाई कार्यालयमा उपस्थित हुन फोन गरे पनि उनी अहिलेसम्म उपस्थित भएकी छैनन् । पूजाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा हालेको उजुरीमा भनेकी छन्,‘रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा जसलाई मैले आमा भन्दै आएकी छु, उहाँबाटै म असुरक्षित छु । मेरो ज्यानको सुरक्षा होस्, स्वतन्त्र रुपमा हिडडुल गर्न सक्ने वातवरण बनाइयोस् ।’ त्यस सम्बन्धमा प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गरेको छैन ।